Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu bọọlụ Norwegian Ụmụaka Jọshụa Akụkọ Akụkọ nke Na-adịghị Ekefuo Ihe Ndị Na-akpata
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye aha ya bụ “Josh“. Joshuamụaka Jọshụa Akụkọ ya na akụkọ na-adịghị mma akụkọ Eziokwu na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe ndị a ma ama site na nwata ruo n'oge.
Nyocha a gụnyere ndụ nwata ya, ndabere ezinụlọ ya, akụkọ ndụ tupu aha ya, ebili na akụkọ a ma ama, mmekọrịta na ndụ onwe onye, ​​wdg.
Ee, onye ọ bụla maara na ọ bụ onye nwere nkà n'ịgba ama bọọlụ nwere mmụọ nwere oke na anya maka ịme goolu. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akwụkwọ akụkọ Joshua King nke bụ ihe na-atọ ụtọ. Ugbu a n’enweghị nsogbu ọzọ, ka anyị bido.
Joshua King Childhood Story - Ndu nwata:
Joshua Christian Kojo King mụrụ na 15th nke Jenụwarị 1992 na nna Gambian na nne Norwegian na Oslo, Isi Obodo Norway. Amuru ya na agburu ndi nwere ochichiri nke n’egosiputa usoro nna ya nke anakpo Chuku King.
Dabere na Telegraph, Chuku dị ka ọtụtụ ndị ọzọ si mba ọzọ si Gambịa bịa Oslo, Norway mgbe nwanne nna ya nwoke nke gara aga ma chọta ọrụ na Sweden gbara ume.
O chebere afọ abụọ iji bulie ego iji malite njem na Northern Europe.
Mgbe Chuku rutere Norway, ọ hụrụ ohere ọrụ dịka onye ikwu ya kwenyesiri ike na mbụ. O mechara nweta ọrụ abụọ a na-akwụ ezigbo ego na ya. Ọ rụrụ ọrụ dịka onye nrụzi kansụl maka ọrụ ụbọchị ebe ọ na-egwu egwu na ọ bụ reggae impresario n'abalị.
Ọrụ ikpeazụ mechara mee ka Chuku bụrụ onye ama ama dịka ọ bụ ọrụ maka iweta ụdị Damian Marley ka ọ rụọ na Oslo. Hụ onwe ya Ibi ndụ nke ọma na Oslo mere ka mkpebi ịghara ịlaghachi na Gambia ma nwee ezinụlọ.
Mgbe na Norway, Chuku zutere nwunye ya (Joshua King's mum) na njikọ ha dugara na ọmụmụ Josh. Joshua King toro na otu n'ime ógbè ndị kacha sie ike na Oslo.
Ọ bụ onye na-arịa ụkwara ume ọkụ kemgbe ọ bụ nwata. Mkpebi ya ịghọ ọkachamara hụrụ ya ka ọ na-alụ ọgụ ma merie ụkwara ume ọkụ.
Joshua King Biography - Ndụ Ndụ Mmalite:
Mgbe ụmụaka ndị ọzọ gara Skiing nke bụ egwuregwu kacha ukwuu na Norway, obere Eze so na ụmụaka ndị ọzọ weere egwu bọọlụ.
Ọchịchọ Eze nwere maka egwuregwu ahụ hụrụ ya mgbe ọ dị afọ 6 na-edebanye aha ya na Romsas nke dị n'obodo ya nke nyere ya ohere iji gosipụta talent ya.
Romsas nke bu aha ulo ndi ntorobia mbu bu kwa agbata obi nke Joshua King na obodo Oslo, Norway. Mgbe ọ nọ na Romas, obere Josh kwalitere n'ọkwá ahụ ngwa ngwa ka ọ na-eme nke ọma megide ndị iro sitere na ntọala ndị ntorobịa ndị ọzọ.
Na 2006, mgbe ọ dị afọ 8, ọ gara sonyere Valerenga, ụlọ ọgbakọ Norwegian ama ama maka aha ọma na ịzụlite ndị na-eto eto na kọleji ka ukwuu na Europe. Ọ bụ nrọ nwatakịrị ọ bụla sonyere na agụmakwụkwọ ka elu n'oge ụfọdụ n'oge ntorobịa ya.
Ndụ na Valerenga adịghị atọ ụtọ dị ka Joshua chọrọ ịchụ ọtụtụ ihe n'àjà. E nwere oge nna ya Chuku nwere ike icheta na-efu ọrụ ya iji gaa ọtụtụ egwuregwu nwa ya nwoke. Ọ na-eme nke a ọbụlagodi na ọ pụtara ịra n'ụra ụgbọ ala ya mgbe ọ na-akpọrọ ya gaa asọmpi dị anya.
Joshua King Biography - tozọ a ma ama Akụkọ:
Jọshụa Eze n'oge ya na Valeanga nwere ọganihu na ọ ga - ezute mbụ United Legend Ole Gunnar Solskjaer bụ onye so rụọ ọrụ dị egwu mgbe ọ kwagara ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ United.
Onye na-eto eto na-egwu egwu mgbe ya na klọb ntorobịa ya na-egwuri egwu tinyekwara onwe ya site na isonye Ole Solskjaer summerlọ akwụkwọ ezumike nká bọl na 2007.
Mgbe ọ nọ na Valerenga, Eze gabiga Ole Solskjaer njikọ bara ọgaranya ịzụ ụgbọ akwụkwọ na Manchester United na ọtụtụ oge.
Eze ijeụkwụ, ike, na eke mechara ike hụrụ Uhie Red Ndị na-akpọ scouts na-akpọ ya dị ka onye na-eto eto na-eto eto na Norwegian football.
N'ikpeazụ, a kpọrọ ya ka ọ bịa England maka ule. Ọ gafere mana iwu UEFA gbochiri ya ịbanye na nkwekọrịta ya na klọb ruo mgbe ọ bụ 16
. Eze mgbe ọ dị afọ 16 sonyeere ntọala ntorobịa ha ozugbo. Mkpebi a bịara mgbe ọ jụrụ onyinye ikpe si n'aka Chelsea. Ee! naanị ị gụrụ ya.
Eze nwere ihe ịga nke ọma n'oge ọ bụla na ntorobịa Man United, ihe ngosi nke hụrụ ya ka ọ na-eme United mbụ ya otu afọ mgbe ọ sonyere ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ.
N'ihi akụnụba ndị Manchester United nwere n'ihu, Eze enweghị ike ịmanye ya ịbanye na ndị agadi. Nke a bụ n'ihi na ọ naghị adị mfe nza Wayne Rooney, Carlos Tevez na Dimitar Berbatov, Cristiano Ronaldo, Ryan Giggs, na Nani.
Joshua King Biography - Na-ewu Onwe Ya Akụkọ:
N'ịgbalị inweta bọlbụ nke mbụ, Eze tinyere oge na mbinye ego iji gosipụta onwe ya.
Joshua King gara n'ihu na mgbazinye ego ya mgbe ọ hụrụ na ọ kabeghị enwe ike ịkwatu onye isi Man United na-agbanyeghị na enweghị Carlos Tevez na Cristiano Ronaldo. Ohere inweta na United bụ ihe siri ike ịbịa.
Na-awụ akpata oyi n'ahụ, n'ime afọ ise, e nyere Eze aka na Manchester United, ọ mere naanị asọmpi asọmpi abụọ ya na ndị ọzọ na mbinye ego. N'etiti klọb 5 na-egwuri egwu, oge ya ahu ihe City bụ ihe kasị baa uru.
Mkpebi ahụ ịhapụ United:
N'ịbụ onye nụchara oge na-adịghị egwu, Eze kpebiri ịmanye ịkwaga mgbe ọ hụchara nkwekọrịta United ya.
Mkpebi a bịara n'oge Sir Alex Ferguson bụ onye na-enyeghị ya oge ọ bụla ga-ala ezumike nká. Tupu ịlaghachi, ọ buru amụma na Joshua King ga-enwe ọdịnihu dị mma. N'okwu ya;
"Ọ dị ngwa ngwa nke ukwuu ma nwee ezigbo ọrụ."
Joshua King kpebiri ịkwaga na ebe obibi free na Bournemouth ebe Eddie Howe wetara ihe kacha mma n'ime ya. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Joshua King Magdalena Temre Storyhụnanya Akụkọ:
Joshua King bụ otu n'ime ndị na-agba ọsọ ụkwụ bụ ndị ọlụlụ ha na-agbanahụ nyocha anya ọha mmadụ nanị n'ihi na ndụ ịhụnanya ya enweghị ihe ọghọm. N'azụ Norwegian na-aga nke ọma, e nwere ezigbo nwunye na Magdalena Temre.
Nwanyị Jọshụa Eze- Magdalena Temre.
Magdalena Temre abụghị naanị nwunye mara mma, mana nke nwere mma na ụbụrụ. A zụrụ ya nke ọma na Marketing na Brand Ijikwa.
Ndị enyi abụọ ahụ na-alụbeghị di na ezigbo ndị enyi nwere mmekọrịta ha na afọ ole na ole tupu ha ekpebie na 2015 iji kee eriri. Ọ bụ ememe nzuzo metụtara naanị ezinụlọ na ndị enyi Joshua King.
Joshua King na nwunye, Magdalena Temre.
Di na nwunye di na nwunye nwere nwa n'oge na-adighi anya. A mụrụ nwa ha nwoke bụ Noah King na Machị 1, 2016. Na-ekpe ikpe site na mgbasa ozi mgbasa ozi ha, Joshua na Temre na Noa na nwa ha nwoke ha hụrụ n'anya na-ebikọ ọnụ.
Ezinụlọ Joshua King.
Ileba anya na ihu Nna na Nwa na-ekpughe ọdịdị dị egwu na ọnụnọ nke ụdị agbụrụ jikọrọ ọnụ na Noa na-ekele nna ya.
Joshua King na Ọkpara, Noah.
Joshua King Ndụ nke Onwe:
Mata ụdị ndụ Joshua King mere ga-enyere gị aka ịmata onye ọ bụ nke ọma. Na-emeso nwunye ya Magdalena Temre dị ka nwa eze nwanyị ga-abụ ihe ngosi ya dị ka a hụrụ site na egbugbu egbugbu n'obi ya nke ọ na-eji iji gosipụta ntụkwasị obi nye nwunye ya.
Eziokwu banyere Joshua King tattoo.
Joshua King bụ onye na-anọchi anya oge, ibu ọrụ ma nwee ike ibute ụzọ n'ime atụmatụ siri ike na nke ezi uche maka ndụ ya.
O nwere nnwere onwe dị n'ime nke na-enyere ya aka inwe ọganihu dị ukwuu na ya na ndụ ọkachamara.
Dika edere ya na akwukwo Instagram, otutu ihe o jiri aka ya mee bu nwunye ya na nwa ya nwoke. Joshua King nwere ezigbo mmekọrịta ya na obere nwa ya nwoke bụ Noa bụ onye yiri ka ọ na-efe ihe niile nna ya mere.
Joshua King- Nwoke egbugbu.
Na-ekpe ikpe site na mmekọrịta ha, a na-eche na Noa ga-anọgide na-ebi nrọ nna ya mgbe ọ lara ezumike nká.
Ndụ Eze nke Joshua Eze:
Joshua King si n'ezinụlọ dị umeala n'obi, onye ndị otu ya hụrụ na nsonye Eze na asọmpi Norwegian, nsọpụrụ.
Ghọ ndị na-arụ ọrụ ike (dị ka a hụrụ site na nna nna) na ịnwe nraranye iji nweta ihe mgbaru ọsọ ọrụ bụ ihe ngosi nke ezinụlọ hụrụ football n'anya karịa ndị Norwegian.
"Mgbe m bụ nwatakịrị, otu ugboro n'afọ, papa m ga-akpọrọ m London ịzụta akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ ọhụrụ tupu ha apụta na Norway," Eze chetara ozugbo ọ gosipụtara nkwupụta bọọlụ mbụ ya.
Joshua King Eziokwu efu:
Joshua King kekọrịta otu akụkọ ezinụlọ na ụzọ ọrụ ya na onye Norway ibe ya na onye bụbu onye egwu Aston Villa John Carew.
Ndị egwuregwu bọọlụ abụọ nwere ụdị ahụ, ije, na ike uche. Somefọdụ Fans kwenyere na Joshua King dị ngwa ngwa.
Ị maara?… Ihe ndekọ egwu egwu nke Callum Wilson nyere Eze ohere iji gosipụta otú ọ dị mma na pitch. Ọbụna mgbe Wilson lọtara, Bournemouth aghaghị ịnọgide na-enwe usoro nke ruru ndị mmadụ abụọ aka.
Ị maara?… Joshua King nọ n'etiti ndị òtù United States Federico Macheda na Gabriel Obertan bụ onye gbalịsiri ike na-eme akara na njikọ nke Premiya. Ọ gara nke ọma mgbe ndị ọzọ kwụsịrị ma daa site na map nke Premier League.
Nyochaa: Daalụ maka ị gụọ Jọshụa King Childhood Story tinyere akwụkwọ akụkọ efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.